Bangalore na Ooty Tour | Kpọọ 91-993.702.7574 maka ịdebanye aha.
Bangalore nwere obi ụtọ dị otu afọ na nke ahụ bụ ihe na - eme ka ọ dị iche iche. Ogige ugwu dị nso bụ Ooty nwere ụfọdụ ebe ndị dị ịtụnanya dị egwu, nke na-eme ka ị sọpụrụ ịma mma ya. Bangalore na Ooty Tour ga-eburu gị isi obodo na "Queen nke ugwu". N'otu aka, oke nke Ogige Botanical nke Bangalore na-ahapụ ndị njem nleta na-atụ egwu na n'aka nke ọzọ, Rose Garden nke Ooty na-ere ha. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-achọ ụdị ahụmahụ ahụ, ị ​​ghaghị ịga Bangalore na Ooty Tour. Ihe 5D / 4N Bangalore na Ooty Tour na-eme ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ebe niile. Nweta ụlọ nke oge a na ụlọ nsọ ndị dị ebube na ebe ncheta. Ooty nke mejupụtara ubi Botanical, nnukwu ugwu na-acha uhie uhie na akwa akwa nke mara mma. Ụfọdụ n'ime ebe kachasị mma na mpaghara a nke mba a gụnyere na Bangalore na Ooty Tour. Ihe ngwugwu anyị na-ekpuchi ebe niile ị ga-achọ.
Mmemme 04 nke ehihie | 035 njegharị.
Bịanụ Bangalore, na-aga n'ihu na Mysore na-aga ileta Summer Palace na Fort na Srirangapatna. Nbanye na nkwari akụ. N'abalị na nkwari akụ.
Mgbe nri ụtụtụ na-ekiri Mysore na-ekpuchi Mysore Palace, Chamundi Hill & Temple na Devaraja Market, mgbe e mesịrị kwaga Ooty
Mgbe nri ụtụtụ gara Botanical Garden, Lake na Doddabetta elu. Ụlọ nkwari akụ ehihie
Mgbe nri ụtụtụ na-aga Bangalore, mgbe ị bịarutere ịbanye na nkwari akụ. Emere abalị na-aga njem nleta obodo nke Bangalore gụnyere ụlọ nsọ Bull, Lalbagh, Ogige Botanical ma kpụga Vidhana Soudha, Ụlọ Ahịa Overnight.
DAY 05: BANGALORE - NWA
Mgbe nri ụtụtụ gara Bangalore Railway Station ma ọ bụ Airport iji jide ụgbọ elu gị maka ebe ọzọ ị ga-aga.